Taariikhda Madaxweyne Kabila - BBC News Somali
Taariikhda Madaxweyne Kabila
31 Disembar 2011
Image caption Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Joesph Kabila
Madaxweyne Joseph Kabila Kabange ayaa mar kale loo dhaariyay inuu shanta sano ee soo socata hogaamiyo, dalka Jamhuuriyada Dimoqraadiga ee Conga, oo ah dalka labaad ee qaarada afrika ugu balaaran,
Markii uu dhaartay ka dib, Kabila waxa uu sheegay inuu ka shaqayn doono, midnimo congo, xuquuqul insaankana uu ilaalin doono,
Amaanka ayaa aad loo adkeeyey maanta, gaar ahaan goobaha ay mucaaradka ku xoogan yihiin, xafladii dhaarta ee joseph kabila kaliya waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dalka Simbabwe Robert Mugabe, oo isaga waligiisba saaxiib ama widaay aad u dhow lahaa madaxda dala Congo.
Hadaba inkastoo Kabila maanta la dhaariyay. Hadana waxaa muran weyn la galiyay xalaal ahaanshaha doorashadii dalkaasi ka dhacday 28-kii bishii November. Waa midee waxaa natiijadii soo baxday ganafka ku dhuftay ragii la tartamay ninkii ugu cuslaa ee Etiene Tishesekedi, oo isaga mar hore isumagacaabay inuu madaxweyne yahay. Isla markaasina qorshaynaya inuu xaflad dhaarin ah samaysto maalinta jimcaha ah. Sidoo kale waxaa su'aal galiyay qaabkii ay doorashada u dhacday korjoogayaashii caalamka ka socday.
Joseph Kabila Kabange. Waa 40 jir ku dhashay deegaanka Lulenge ee bariga dalka Congo. Waxaa dhalay madaxweynihii hore ee dalkaasi Laurante Kabila. Oo sanadii 2001-ka uu dilay mid ka mid ah ilaalidiisii.
Joseph Kabila isagoo shan jir ah, aabihiisana uu markaasi jabhad ahaa ayuu u qaxay dalka Tanzaania. Oo uu ku soo koray. 1996-dii ayuu dalka Uganda waxbarasho cilmiga sharciyadaha ah u aaday.
Xiligii uu aabihiis Laurant dagaalka kula jira kaligii taliyihii hore ee Mobuto Seseko, Joseph waxuu la taliye dhinaca meleteriga u noqday aabihiis, oo berigaasi hogaaminaya jabhadii markii dambe xukunka ka tuurtay Mobutu Seseko.
Abihiis markii uu xukunka Congo la wareegay Magacii Zair ee dalkaasi la oran jirayna laga badalay, Joseph Kabila waxuu dalka Shiinaha u aaday Tawabar Meleteri.
2001-dii markii aabihii la dilay. ayuu noqday madaxweynihii dunida ugu yaraa. Arinka sida weyn loogu xasuustana waxay ahayd inuu la heshiiyey jabhadii aabihiis ku kacsanaa, taasoo aaqirkii horseeday in Congo laga qabto, doorashadii abid dalkaasi ka dhacda